Global Voices teny Malagasy » Norvezy: Ny Soritra Anaty Aterineto Momba ny Mpamono Faobe Iray · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Marsa 2019 14:04 GMT 1	 · Mpanoratra Solana Larsen Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Eoropa Andrefana, Norvezy, Foko sy Fiaviana, Hevitra, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Vaovao Mafana
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Jolay 2011)
Arabe iray ao Oslo, andro iray taorian'ilay fipoahana, sary nalain'i Francesco Rivetti tamin'ny 23 Jolay 2011, nozaraina tao amin'ny Flickr (CC-BY-NC-SA)
Ny Zoma 22 Jolay 2011, tamin'ny 3:26 ora tolakandro, nahafaty olona fito ary niteraka fahasimbana be teny amin'ireo tranobem-panjakana maro ny fipoahana iray tao Oslo. Nitohy ora maro taty aoriana ilay fihorohorohoana rehefa nitifitra ny mpandray anjara tamin'ny lasin'ny Fetin'ny Tanora avy amin'ny Antokon'ny Asa (AUF) [no] tao amin'ny nosin'i Utøya  ny olona iray nisandoka ho polisy. Farafahakeliny olona 85 no maty novonoina tao amin'ilay nosy talohan'ny fisamboran'ny polisy sy famantarana ilay mpitifitra ho lehilahy Norveziana 32 taona antsoina hoe Anders Behring Breivik .
Haingana dia hita ny pejy Facebook -n'i Breivik (efa tsy an-tambajotra intsony ankehitriny) , torak'izany koa ny hafatra Twitter tokana izay navoakan'ny tamin'ny 17 Jolay. Mbola nanohy ny nikaroka ireo soritra rehetra mikasika ilay lehilahy teny anivon'ny tambajotran-tserasera izay mety hanampy amin'ny fanazavana ireo hetsiny tsy takatry ny saina foana ireo blaogera sy mpanao gazety tany Norvezy.
Mitady hirika hahafantarana izay antony
Tamin'ny Sabotsy, hitan'ny blaogera iray antsoina hoe Kevin Slaughter (@kevinslaughter ) ny hafatra an-taratasy fikomiana miisa 1514 pejy ary lahatsary  iray maharitra 12 minitra izay toa avy amin'i Breivik na dia navoaka tamin'ny teny Anglisy tamin'ny solonanarana ”Andrew Berwick” aza izany. Kabary iray misavoritaka izay manohitra ny ”Marksisma ara-kolotsaina” sy ny ”famadihana an'i Eoropa ho silamo” izany ary manome torohevitra ho an'ireo te-ho mpampihorohoro any aoriana. Nanamarina  ireo media norveziàna fa navoakan'i Breivik tamin'ny andro nisehoan'ireo fanafihana ilay taratasy sy lahatsary.
Na dia sarotra aza ny hihevitra ilay taratasy ho toy ny vakiteny azo atolotra, lasa lohahevitra ho anà adihevitra iray malaza ny fahalianana lehibe mikasika ny mombamomba ilay mpamono.
Ao amin'ny Twitter, afaka jerena ankehitriny ny resaka mikasika ilay taratasy fikomiana amin'ny alalan'ilay tenifototra #N2083  izay manondro ny lohateniny, ”2083: Fanambarana Eoropeana Mikasika ny Fahaleovantena.”
Namoaka mivantana ireo fitanisàna maro avy tao amin'ny Twitter izay avy amin'ilay hafatra an-taratasy i Blake Hounshell (@blakehounshell ), mpitantana ny tonian-dahatsoratra ao amin'ny Foreign Policy Magazine  ( Gazetiboky Politika Ivelany) raha toa am-pamakiana izany tamin'ny Sabotsy.
@blakehounshell : Manaiky amin-kafaliana ny mpanoratra, ”Tsy natao ho an'ny rehetra ny ho Mpiaro Mitafy Akanjo Vy”
@blakehounshell : ”Miseho ho mahitsy ara-politika na farafaharatsiny antonony, miakanjo toy ny mahazatra. Miezaka hametra ireo hetsika fandraisanao fitenenana. Misoroka ny manoratra diso tafahotra amin'ny sehatra fifakalozan-kevitra.”
@blakehoundshell : Manafatrafatra ny mpanoratra mba hilazanao amin'ireo namanao/mpiara-miasa/fianakaviana fa nanomboka nilalao ianao, ohatra, World of Warcraft ary te-hifantoka amin'izany.
Tsy nahatandrina ny toroheviny, namoaka hafatra tany amin'ny sehatra fifanakalozan-kevitra tamin'ny aterineto i Breivik, tao anatin'izany ny tranonkala Norveziana an'ny elatra havanana sy ny Document.no, tranonkala mpanohitra ny fifindramonin'ireo silamo. Nadika tamin'ny teny Anglisy ary naverina navoaka  tao amin'ny blaogy manokana an'i Doug Saunders (@DougSaunders ) ireo fanehoankeviny teto tamin'ny 2009 sy 201 0 [teny norveziàna]. Doug Saunders dia lehiben'ny birao Eoropeana ao amin'ny gazety Globe sy Mail ao Kanada.
Toy ny hita na aiza na aiza
Tamin'ny Alahady, hitan'i Hans Rustad , mpamorona ny Document.no fa nangala-tahaka tanteraka ireo fanambarana rehetra  [norv] avy tao amin'ilay hafatra an-taratasy fikomiana an'i Ted Kaczynski , izay fantatra hany koa ho ”Unabomber” ilay hafatra an-taratasy fikomiana an'i Breivik. Nandefa fonosan'entana voafandrika efa ho roa ambin'ny folo teo ho eo tany amin'ireo anjerimanontolo sy orinasam-pitaterana an'habakabaka i Kaczynski teo anelanelan'ny taona 1978 sy 1995, izay nahafaty olona 3. Teo amin'ny nanoratan'i Kaczynski hoe ”mpomba ny havia”, nosoloin'i Breivik ho ”Marksista ara-kolotsaina” izany. Manoratra i Rustad fa hitany tamin'ny alalan'ny loharano tsy fantatra anarana izay ”nandalina ilay hafatra an-taratasy fikomiana nandritra ny alina, ary ”nahamarika tampoka izany fitoviana” izany. Mamaly ireo fahalianana lehibe an'ny haino aman-jery, nanalavitra  an'i Breivik ny Document.no [no], nanasongadina ireo tsikera manokana an'i Rustad tao amin'ilay hafatra an-taratasy fikomiana, ary koa tamin'ny fanasongadinana fa efa namoaka hafatra tany amin'ny sehatra fifanakalozan-kevitra maro hafa ihany koa toy ny Minerva  [no] sy ny tranonkala Soedana neo-Nazi Nordisk.nu  [se]., i Breivik.
Hita tao amin'ny Eu.Battle.Net, sehatra fifanakalozan-kevitry ny mpilalao amin'ny aterineto, izay ihaonan'ireo mpilalao World of Warcraft  sy lalao hafa afaka lalaovin'ny mpilalao maro miaraka mba hiresahana mikasika ny lohahevitra momba ny lalao, ny hafatr'i Breivik taloha. Tao anatin'ny lohahevitra iray mitondra ny lohateny hoe ”Ilay mpanafika avy any Oslo, olona iray mpilalao WoW??” , miresaka ireo mpikambana ao amin'ilay sehatra fifanakalozan-kevitra raha nifanerasera tamin'i Breivik izy ireo, ary ny fomba mety nitarihan'ny tantaran-dalaony nankany amin'ny fanehoan'ireo haino aman-jery ireo lalao an-dahatsary amin'ny endrika ratsy.
Tao amin'ny The Lede, blaogim-baovaon'ny NY Times, navoakan'i i Robert Mackey. ireo rohy maro mankany amin'ny ”Hirika An'aterineto mikasika ny Antony manosika ny olona iray Ahiana ho Mpanafika’ ‘ sy ny lahatsarin'olontsotra maro mampiseho ny fahasimbana eny amin'ny lalan'i Oslo 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/03/10/132554/
 Anders Behring Breivik: http://en.wikipedia.org/wiki/Anders_Behring_Breivik
 pejy Facebook: http://publicintelligence.net/wp-content/uploads/2011/07/FireShot-capture-020-Anders-Behring-Breivik-nb-no_facebook_com_people_Anders-Behring-Breivik_100002651290254.png
 ny hafatra an-taratasy fikomiana miisa 1514 pejy : http://www.kevinislaughter.com/2011/anders-behring-breivik-2083-a-european-declaration-of-independence-manifesto/
 Nadika tamin'ny teny Anglisy ary naverina navoaka: http://dougsaunders.net/2011/07/political-thinking-anders-behring-breivik/
 teto tamin'ny 2009 sy 201: http://www.document.no/anders-behring-breivik/
 fa nangala-tahaka tanteraka ireo fanambarana rehetra: http://www.document.no/2011/07/behring-breivik-kopierte-una-bomberen/
 Ted Kaczynski: http://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Kaczynski
 World of Warcraft: http://en.wikipedia.org/wiki/World_of_Warcraft
 ”Ilay mpanafika avy any Oslo, olona iray mpilalao WoW??”: http://eu.battle.net/wow/en/forum/topic/2423043490
 ”Hirika An'aterineto mikasika ny Antony manosika ny olona iray Ahiana ho Mpanafika’: http://thelede.blogs.nytimes.com/2011/07/23/scouring-the-web-for-clues-to-a-suspected-attackers-motives/
 lahatsarin'olontsotra maro mampiseho ny fahasimbana eny amin'ny lalan'i Oslo : http://thelede.blogs.nytimes.com/2011/07/22/video-of-oslo-explosion-aftermath/